Waini 4.17, D9VK 0.22 uye DXVK 1.4.1: kunze nenhau dzemitambo | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Linux Mitambo, Windows
Waini 4.17 yabuda, inoenderana dhata yekuisa yemuno Microsoft Windows software ine vhezheni nyowani nekuvandudza. Pakati pezvinhu zvitsva tinogona kuratidza iyo Mono nyowani, uye rutsigiro rweDXTn dhizaini yekumanikidza. Improvements dzinosimudzirwa neValve neCodeWeavers kugadzirisa Proton kuitira kuti vatengi vavo vatambe mitambo yemavhidhiyo yeWindows kubva kuSteam. Pamusoro pekuvandudzwa uku, mamwe mabugs akagadziriswawo, kugadzirisa muARM64 rutsigiro, rutsigiro rweRSA kiyi yekugadzira, rutsigiro rweXRandR ziviso shanduko michina, uye Windows script runtine raibhurari.
Kune iyo nhau tinofanirwa kuwedzera dzimwe mbiri dzinonakidza. Imwe nezvakevhezheni DXVK 1.4.1 uye imwe pane vhezheni D9VK 0.22 ine zvakawanda zvine chekuita nenyika yekutamba. Chekutanga ndechekushandura iyo DirectX graphic API mirairo kuVulkan, kune ese emitambo yemavhidhiyo akavakirwa pairi. Neiyi nyowani vhezheni yeDXVK une mamwe akagadzika D3D10 bugs anga achikonzera tsaona.
Iyo zvakare ine gadziriro yekubata zvisina kufanira kwechinyakare cheUNDEFINED topology, zviputi zvakakonzera tsaona nemazita e mitambo yemavhidhiyo senge Batman: Arkham Guta, Hitman 2, Ni no Kuni Remastered, etc. Izvi zvinoreva kuti kuvandudzwa kwechiitiko chevashandisi chisingazomhanye mukugumbura kwakawanda. Nhanho nyowani kumberi mukusimudzira iyo pamwe nemamwe mapurojekiti ari kubatsira zvakanyanya kune ma gamers.
Pakupedzisira, D9VK 0.22 zvakare ine kugadzirisa, chirongwa chinorangarira kuti chiri kushandisa DirectX 3D 9 paVulkan yakavhurika graphical API. Pakati pezvinhu zvitsva pane zvimwe zvakagadziriswa mabugs, senguva dzose, uye zvakare kutsigira kugadzirisa. Asi pamwe kumwe kwekuvandudza kwakanyanya kune chekuita nemutambo wevhidhiyo Iyo Sims 2 uye mamwe mazita ayo "anonyunyuta" nezve kushandiswa kwevakuru vatongi.
Nhatu nhau dzandinotarisira kuti unoda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Waini 4.17, D9VK 0.22 uye DXVK 1.4.1: kunze nenhau dzemitambo